Kusasa kuyathengiswa "Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono", okwakamuva okuvela kuLaurent Gounelle | Izincwadi Zamanje
Kusasa kuyadayiswa "Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono", okwakamuva okuvela kuLaurent Gounelle
Kusasa kuzothengiswa inoveli entsha kaLaurent Gounelle. Ngaphansi kwesihloko Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono, eshicilelwe yi-Editorial Planeta, iGounelle yethula inoveli ezokufundisa ukujabulela yonke imizuzu yokuphila ngenxa yemibono emincane ukuze uzizwe uphila kakhulu.
Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono kuphawula ukubuya kukaLaurent Gounelle, ongomunye wochwepheshe abakhulu ekulandiseni ngokuzisiza kanye nombhali wezambulo eFrance wenoveli ekhuthazayo.
Amazwibela athi «Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono»
Isikhathi sikaJonathan siyaphela futhi manje nje usefundile izimfihlo zempilo ejabulisayo, ngakho-ke uthatha isinqumo: uzosiza abanye. Amasu azohlukahluka: kusuka ekunikezeni izimbali kumgibeli wesikhombisa olayini webhasi, ukuthumela amakhofi esikhundleni "somuntu ongamazi" noma ukuzama ukwenza umakhelwane wakhe, umpheki wamakhekhe, ukumamatheka, indoda ekhonondayo ekwazi ukwenza ama-muffin amnandi kakhulu emhlabeni. UJonathan uzokwenza konke okusemandleni ukukhombisa ukuthi impilo iyisipho okufanele usiphile ngokugcwele.
Funda isahluko sokuqala se- Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono lapha
ULaurent Gounelle escoach, onguchwepheshe kwezentuthuko yomuntu futhi onentshisekelo ngefilosofi. IGounelle Uhambe iplanethi iminyaka engaphezu kwengu-nane eyokhuluma nezingcweti ezihamba phambili kukho konke okuphathelene nokusebenza kwengqondo nezindlela ezahlukahlukene zokwenza ngcono izimpilo zethu. Inoveli yakhe yokuqala, Indoda ebifuna ukujabula, ngokushesha yaba ngumthengisi othengisa kakhulu emhlabeni jikelele.
UngakwaziThenga Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Kusasa kuyadayiswa "Namuhla ngizokwenza umhlaba ube indawo engcono", okwakamuva okuvela kuLaurent Gounelle